Shir aayaha Libya oo London ka dhacaya - BBC News Somali
Shir aayaha Libya oo London ka dhacaya
Image caption Ra'iisal wasaaraha Britain shirka Libya
Shirka waxaa loola jeedaa in dib loogu xaqiijiyo sida ay isbahaysiga caalamiga ah uga go'an tahay qorshaha haatan lagu socdo iyadoo la bilaabayo hab lagu helo qorshe siyaasadeed mustaqbalka dalka Libya.
Guulaha milateri ee dowladda iyo mucaaradka Libya uu midba mar gaarayo ayaa ka dhigaya wax aad u adag in la sameeyo qorshe diblomaasiyadeed oo si cad loo fahmi karo. xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain, William Hague, oo shirka kahor hadlay, waxaa uu sheegay in ujeedadu ay tahay in la bilaabo hab siyaasadeed, isla markaana la abuuro xaalad ay dadka reer Libya go'aan uga gaaraan mustaqbalkooda. waxaa kaloo sii socda hawl gallada xagga cirka ee laga wado dalka Libya.
hase ahaatee Mr Hague waxaa uu u muuqday inuu soo jeedinayo qaab looga gudbi karo kornayl Qaddaafi, isagoo xusay in dadka dembiyada galay la horkeeni doono maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah, laakiin intaas ku daray in halka uu kornayl Qaddaafi tegayo, iyo haddiiba uu tegayo, ay ku xiran tahay isaga laf ahaanttisa iyo dadka reer Libya inay go'aan ka gaaraan.